Sinda kwaye uchume! UNWTO, lixesha lokuba uyile kwakhona ukhenketho!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Sinda kwaye uchume! UNWTO, lixesha lokuba uyile kwakhona ukhenketho!
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • lomhleli • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Icandelo lezokhenketho lijonge ngakumbi nangakumbi eSaudi Arabia ukukhokelwa kunye nenkxaso. Oku bekucacile kwindibano yanamhlanje ye-UNWTO yengingqi ye-Afrika e-Cabo Verde. “Lixesha lokuba siyile kwakhona ukhenketho lwexesha elizayo” yayingumyalezo wenkokheli yase-Saudi kwi-World Tourism ne-Afrika.
Intlanganiso yama-64 yeKhomishini ye-UNWTO yase-Afrika iqhubeka eSal, eCabo Verde, kwihotele i-Hilton.
Iindawo ekuxoxwa ngazo zibandakanya uhlaziyo kwi-International Code yoKhuselo lwaBakhenkethi, amalungiselelo eNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo, kunye nokutyunjwa kwabagqatswa.
Inkwenkwezi yalo msitho yavela eSaudi Arabia. UYE UAhmed al-Khatib, UMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia, wenze intetho evakalisa lo msitho kunye nabathunywa.
I-UNWTO inayo iikomishini zommandla ezintandathu - iAfrika, iMelika, iMpuma yeAsia kunye nePacific, iYurophu, uMbindi Mpuma kunye noMzantsi Asia. Iikhomishini zidibana kube kanye ngonyaka kwaye zenziwa ngawo onke amaLungu aPheleleyo kunye namaLungu aDibeneyo avela kuloo mmandla. Amalungu adibeneyo avela kummandla athatha inxaxheba njengababukeli.
Phakathi kwengxubakaxaka ye-COVID-19, elinye ilungu le-UNWTO laye lavela ngokuzimasa zonke iintlanganiso zekhomishini yengingqi kwihlabathi liphela ukuza kuthi ga ngoku.
Eli lungu buBukumkani base-Saudi Arabia, obumelwe ngu-HE Ahmed al-Khatib, Umphathiswa Wezokhenketho.
UAhmed al-Khatib | UZurab Pololikashvili
UMphathiswa ubonwe “njengenkwenkwezi” engenakuphikiswa nakweyiphi na intlanganiso okanye umsitho awuzimasa, kwaye uzimasa ezininzi, ebonisa ukuzimisela kwakhe kushishino lwezohambo nokhenketho lwehlabathi.
ISaudi Arabia ichithe iibhiliyoni ukunceda eli candelo hayi kubukumkani kuphela kodwa naphina emhlabeni. Umnqweno wokuzisa iziko lezoKhenketho noKhenketho eRiyadh kubandakanya ukuhamba kwekomkhulu le-UNWTO.
Abathunywa kwiKhomishini yeNgingqi ye-UNWTO yanamhlanje ye-Afrika baqwalasele kakhulu xa u-Ahmed Ahmed-Khatib ethetha nabathunywa. Wenza la manqaku alandelayo:
Ubhubhane ugxininise isidingo esingxamisekileyo sentsebenziswano eyomeleleyo yamanye amazwe, intsebenziswano kunye nobunkokeli.
Sisebenzisana namahlakani e-Afrika iphela ukuqinisekisa ukuba ushishino lokhenketho lwehlabathi lusakhela phezu kwezifundo ze-COVID-19.
Asinakukwazi ukuhlawula intlekele yamazwe ngamazwe ukonakalisa icandelo kwixesha elizayo njengoko kunjalo.
Kodwa ndinomyalezo oqinileyo nolungileyo endinokwabelana ngawo namhlanje. Singathatha amanyathelo ngoku ukuqinisekisa ukuba eli candelo libalulekileyo liyomelezwa ukuze lijongane nemingeni ezayo.
U-al-Khatib ushwankathele umyalezo wawo:
Sinda kwaye uchume!
… Lixesha lokuyila ngokutsha ukhenketho lwexesha elizayo!
Impembelelo ye-COVID-19 kwicandelo lezoKhenketho e-Afrika
Impembelelo ye-COVID-19 kukhenketho lwamazwe e-Afrika lubangele ukwehla kwe-74% kwinani labakhenkethi bamanye amazwe kunye ne-85% ngokweerisithi zokhenketho zamanye amazwe. Idatha ka-2021 ibonisa ukuba le ngingqi ihlupheke ukwehla kwama-81% abafikayo bamanye amazwe kwiinyanga ezi-5 zokuqala zika-2021 xa kuthelekiswa no-2019. Impembelelo zemimandla ibonisa ukuba uMntla Afrika ulahlekelwe ngama-78% abafikayo ngo-2020 nakwi-Sub-Saharan Africa 72%.
Le ndlela inye ikhoyo kwidatha ye-2021 ebonisa ukwehla kwe-83% kunye ne-80% ngokwahlukeneyo kwiinyanga ezi-5 zokuqala zonyaka.
Ukusukela nge-1 kaJuni ka-2021, i-Afrika ibambe inqanaba elisezantsi lokuthintelwa kokuhamba endaweni xa kuthelekiswa neminye imimandla yehlabathi, ngokweNgxelo ye-10 ye-UNWTO malunga nezithintelo zokuhamba. I-70% yazo zonke iindawo eziseAsia nasePacific zivaliwe ngokupheleleyo, xa kuthelekiswa ne-13% kuphela eYurophu, kunye ne-20% eMelika, i-19% e-Afrika, kunye ne-31% kwi-Middle East.
Idatha efumanekayo kwi-UNWTO yoKhenketho yokuBuyisa isiKhenketho kwizalathi ezahlukeneyo zorhwebo iqinisekisa imeko yempembelelo apha ngasentla.
Idatha evela kwi-International Civil Aviation Organisation (ICAO) ibonisa ukuba amandla omoya wasekhaya asezantsi ngama-33% xa kuthelekiswa no-2019 ukusukela ngoJulayi, ngelixa iindlela kwiindlela zamanye amazwe ziphantsi ngama-53%. Okwangoku, idatha ekubhukweni kohambo lomoya ukusuka ForwardKeys ibonisa ukwehla okubalulekileyo kwe-75% kokubhukisha okwenene komoya.
Zombini ezi ziphumo zingcono ngokuthelekisa umndilili wehlabathi apho amandla omoya kwiindlela zamazwe aphesheya angama-71% ezantsi kunye nokubhukisha ama-88%.
Idatha ye-STR ibonisa ukuba lo mmandla wafikelela kuma-42% kwindawo yokuhlala ihotele ngoJulayi 2021, oku kuphucuka okucacileyo ngokuhamba kwexesha ngo-2021. Ngokwemihlaba, uMntla ne-Sub Saharan Africa (38% kunye ne-37% ngokwahlukeneyo) zibonisa iziphumo ezingcono kune-Afrika eseMazantsi (18%) apho imeko yaba mandundu ngoJulayi.
Ukusekwa kwee-Ofisi zeNgingqi ze-UNWTO
La mazwe mahlanu alandelayo engingqi ye-Afrika: uMzantsi Afrika, iMorocco, iGhana, iCabo Verde, neKenya bazise ngokusesikweni uNobhala-Jikelele ngokubonisa kwabo umdla wokuseka i-Ofisi yeNgingqi ye-UNWTO ye-Afrika ukomeleza intsebenziswano nenkxaso, ngokunjalo ukuxhasa ukuphunyezwa kwe-Ajenda ye-Afrika-yezoKhenketho kuHlumo oluBandakanyayo kunye nokwazisa inkqubo yokwabela abaphantsi amagunya kwimisebenzi ye-UNWTO kunye nemisebenzi yayo ukuze ilungelelaniswe ngokusondeleyo kwiimfuno nezinto eziphambili zamazwe angamalungu e-Afrika.
IKomiti yeNgxaki yezoKhenketho kwiHlabathi liphela
Kwingxelo ethiwe thaca kubathunywa eCabo Verde, uNobhala-Jikelele uthe kwingxelo yakhe ukuze kuqinisekiswe ukuphendulwa okulungelelanisiweyo nangempumelelo, uNobhala-Jikelele waseka iKomiti yeNgxaki yezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye nabachaphazelekayo kwicandelo likarhulumente nelabucala. Intlanganiso yayo yokuqala ngo-Matshi 19, 2020.
IKomiti iqulethe i-UNWTO, abameli bamazwe angamaLungu ayo (Izitulo ze-UNWTO Council Council kunye neeKomishini zeNgingqi ezintandathu kunye namanye amazwe anyulwe ziiKomishoni), yi-World Health Organisation (WHO), yi-International Civil Aviation Organisation (ICAO Umbutho woLwandle lwaMazwe ngaMazwe (i-IMO), uMbutho wabaSebenzi weHlabathi (i-ILO), uMbutho weNtsebenziswano kwezoQoqosho noPhuhliso (i-OECD), uMhlaba
I-Bank (WB), kunye necandelo labucala-aMalungu aManyeneyo e-UNWTO, i-Airlines Council International (ACI), i-Cruise Lines International Association (i-CLIA), i-International Air Transport Association (IATA), kunye ne-World Travel and Tourism Council (WTTC).
Emva kweentlanganiso ezi-6 zekomiti yeengxaki, igqibe kwelokuba yenze ikomiti yezobuchwephesha yokudala imigangatho yehlabathi kunye neenkqubo zokuqalisa ukhenketho kwakhona.
Nge-8 ka-Epreli, kwintlanganiso yayo ye-9, iKomiti ixhase iiNgcebiso ze-UNWTO zokuQala kwakhona uKhenketho ezibandakanya iindawo ezi-4 eziphambili: 1) Qalisa kwakhona ukhuseleko lokuwela imida 2) Ukukhuthaza ukuhamba ngokukhuselekileyo kuwo onke amanqaku ohambo; 3) Ukubonelela ngemali kwinkampani nokukhusela imisebenzi; kunye 4) Ukubuyisa ukuzithemba kwabahambi
Ngaphantsi kwe hashtag #traveltomorrow, UNWTO ebekhuphe ingxelo ekuxhaseni imisebenzi noqoqosho ngohambo nangokhenketho.
Abangaphakathi kwimibutho ekhankanyiweyo kwingxelo kaNobhala-Jikelele babengenazinto zingako.
Nini eTurboNews ubuze isigqeba se-WTTC malunga nokuhamba rhoqo kweentlanganiso zeKomiti yeNgxaki yeHlabathi, impendulo ibiyile: Andiqinisekanga malunga nokuhamba rhoqo kodwa hayi rhoqo. Asazi kangako ngayo. Sinamalungu omsebenzi wethu ahlangana qho ngeveki ngaphezulu konyaka.
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika u-Cuthbert Ncube wamkela umyalezo wethemba, umbono, kunye nokukhokelwa yi-Saudi Arabia ibonakalisa e-Afrika.
Wa xelela eTurboNews, IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika sikulungele ukusebenzisana ne-UNWTO kunye ne-Kingdom of Saudi Arabia ukwenza i-Afrika 'ibe yindawo ekhethwe lihlabathi.' ”
UMary Kalikawe uthi:
NgoSeptemba 4, 2021 kwi-19: 13
Umphathiswa weBravo woKhenketho eSaudi Arabia. Usihlalo weBravo ATB uNcube